डा. अवस्थी तपाईं बेवकुफ हो ! - Health Today Nepal
January 7th, 2020 स्वास्थ्य विशेष0comments
तपाईंलाई एक पृथक् र आफ्नो कर्तव्यमा दत्तचित्त राष्ट्रसेवकका रूपमा दशक अघिदेखि चिन्दै आएँ, बुझ्दै आएँ । तर आज म मेरो बुझाइमा कतै त्रुटि त छैन भन्नेमा पुगेको छु । अझ निम्छरो शब्दमै भन्नु पर्दा तपाईं बेवकुफ हो कि भन्ने पो लाग्दैछ ।
मैले थाहा पाएसम्म तपाईलाई नपुग्दो केही छैन । नोकरी अवधि अझै बाँकी छदैछ । त्यसैमा तपार्इंले सरकारी नोकरी छाडेकै दिन मनग्गे तनखा दिएर तपाईंलाई आबद्ध गर्न दातृ निकायबीच हानथाप हुने पक्का छ रे भन्ने पनि सुन्दै आएको छु । चार सदस्य रहेको सुखी परिवार । एक छोरा एक छोरी, आफू दुई बूढाबूढी । कस्तो सुखी र खुसी परिवार आहा ! आफू कहलिएको डाक्टर, धर्मपत्नी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक । छोराछोरी दुवैले पूर्ण छात्रवृत्ति पाएर एमबीबीएस पूरा गरिसके । छोरा त सरकारी सेवामै होमिइसके । छोरी एमबीबीएसपछि पनि पूर्ण छात्रवृत्तिमै अमेरिकामा विद्यावारिधि गर्दैछिन् रे । छोरीले आफू अध्ययनरत युनिभर्सिटीमा टपेको सुनेर तपाईंमा सन्तानप्रति बिछट्टै खुसी छ सायद । किनकि अब त छोरीको हैसियत नै बेग्लै हुने तपाईं ढुक्क हुनुहुन्छ । र केही दिन पछि तपाईले भनेको कुरो सुनेर त तपाई झन् महाबेवकुफ जस्तो पो लाग्यो मनमनै । तपाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो ‘छोरीले अमेरिकामा ३५ लाख पुरस्कार पाइन् । उनले बाबा यो पैसा केमा खर्च गर्नेभन्दा मैले सकेसम्म स्वास्थ्य सेवामा खर्चिनु भने रे ।’ तपाईंमा स्वास्थ्य सेवाको नसा देखेर म हैरान भए । अनि बस्ने कटेरो पनि छैन भन्नु छैन । काठमाडौंमा उहिल्यैदेखि राम्रै घर छ क्यार ।
मलाई त अझ यतिसम्म भन्न मन छ कि तपाई साह्रै कुबुद्धि भएको उच्च ओहोदाको सरकारी अधिकृत । तपाईमा सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्यसेवाको अवस्थामा सुधार गरिछाड्ने हुटहुटी छ है ? म सोच्छु अहिलेको समाजमा तपाईको उद्देश्य कसरी फिट होला ? तपाईं कसरी फिट हुन सक्नु होला ? किन जताततै देख्छु, केही गर्न खोज्नेलाई प्रोत्साहनभन्दा पनि स्वार्थकेन्द्रित भई पछार्न खोज्नेहरूको पल्लाभारि भएको समाज छ । तपाईलाई लाग्दो हो ‘विगतमा पनि सजिलो त कहाँ थियो र । तर गर्न खोजे त रोकिँदो रहेनछ नि !’ तर अह ः मलाई अहिले त्यस्तो लाग्दैन ।
आमा र बुवाको निधन हुँदा आफूले पाउने १५ दिनको किरिया बिदासमेत छोट्ट्याएर बीचैमा काममा फर्किने तपाई , ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ भन्ने सिद्धान्त र व्यवहार अपनाउनेहरूकै हाईहाई भइरहेको यो जमानामा तपाई चाहि घर बिदा, पर्व बिदा अन्य के के बिदाका सुविधाहरू पनि नलिएर सेवामै समय खर्चिन चाहने तपाईलाई बेवकुफ नभनी के भन्नु ?
अझ पनि मनैदेखि भन्छु । स्वास्थ्य सुधारका नयाँनयाँ योजना ल्याएर वाहवाही कमाउला भन्ने लागेको भए त्यो तपाईको महाभूल हुनेछ । तपाईं जतिजति नयाँ योजना ल्याउनुहुन्छ नि, त्यत्ति तपाई फस्नु हुनेछ । अनावश्यक तनावले च्यापिनु हुनेछ तपाई । तपाईले जति पनि योजना बनाउनु भएको छ नि सर, दाबाका साथ भन्छु, ती सब बेकार हुन् । आप्नै पालामा सरकार र दातृ निकायको सहयोगमा पहाडी कुनै एक जिल्लामा ट्रमा सेन्टर बनाएरै छाड्छु, सुत्केरी र गर्भवतीलाई अकालमा मर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउँछु, बालबालिकालाई कुपोषण हुने अवस्थाबाट जोगाउने प्रयास गर्छु, खोपबाट कुनै पनि बालबालिका बञ्चित हुने अवस्थामा आउन दिन्न, निःशुल्क औषधिको पूरापूर बन्दोबस्तको प्रयास गर्छु, मातहतका कर्मचारीलाई मनपरी गर्न दिन्न भन्ने तपाईको जुन प्रण छ नि त्यसैले तपाईले घेरिनु हुनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थामा टेली अल्ट्रासाउन्डको सुविधा लन्च गर्ने उपकरण उपलब्ध गराउने परिकल्पना गर्दा पनि तपाईले झन्झट वा अड्चन व्यहोर्नै पर्नेछ । खरिद प्रक्रियामा शंका लागे अनुसन्धान गर्नुको साटो तपाईले अल्ट्रासाउन्ड उपलब्ध गराउने योजना नै त्रुिटपूर्ण छ भन्नेहरूको पल्ला भारी हुन बेर छैन । त्यसैले दुर्गमका सुत्केरी र गर्भवतीको अकालमा ज्यान जाने अवस्थामा न्यूनीकरण गर्छु भन्ने तपाईले योजना पनि बेकार हो । आधारभूत स्वास्थ्यपालिकाहरूमा निहित भइसक्यो । तपाई किन टाउको दुखाउनुहुन्छ गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रटान गरेर ।
बैतडी होस् या दैलेख या बाजुरा वा अन्य जिल्ला । तपाईले आफू बसेका जिल्लामा तहल्कै मच्चाउनु भयो है । तपाईका योजनाको पदचाप धेरैले समाते । सफलता मिल्यो । तर अहिले त्यो अवस्था होइन नि सर । तपाईं भन्नुहुन्छ, बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाऔं, छाउपडी गोठमुक्त प्रदेश बनाऔं, सार्वजनिक कार्यालय धूमपानमुक्त बनाऔं । समयको पालना गरौं । नमुना प्रदेश बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा नमुना कार्यक्रम लन्च गरौं, दातृ निकायको भरपुर उपयोग गरौं । अप्ठेरोमा परेका सुत्केरीको उद्धारका योजना बनाऔं, पत्रकारलाई स्वास्थ्य पुरस्कार, स्मार्ट हेल्थ योजना ल्याऔं । तर म त भन्छु यो तपाईको अर्को बेवकुफ हुनेछ ।
Previous article लाइसेन्स परीक्षा चैत भित्रै गर्दैछौं : रजिस्टार भट्ट
Next article सुदर्शन बस्नेतको अध्यक्षतामा प्राकृतिक तथा योग हस्पिटल एशोसिएसन (निहान) गठन